Soo dejisan Inno Setup 6.1.2 – Vessoft
WindowsHorumarinKobcinta dadka kaleInno Setup
Bogga rasmiga ah: Inno Setup
Wikipedia: Inno Setup
Create an ku xidhaba buuxda Windows waa mid aad u fudud ula Innosetup barnaamijka. App Tani ayaa u muuqday suuqa dabayaaqadii 1990, laakiin hadda waxaa la noqoto horjeeda halis ah qaar ka mid ah dhigooda ganacsi. Intaa waxaa dheer, waxaa inta badan outperforming tartamayaal. Isticmaalka barnaamijka wuxuu noqon doonaa si siman loo isticmaali karo si version shiidaa kasta oo Windows. Faa’iidada muuqata oo ah barnaamijka waa user-friendly iyo interface dareen leh. User u xulan kara nooca rakibaadda ka hor abuuraya file rakibo.
Barnaamijku wuxuu noocyada kala duwan ee riixo shaqeeyaa
Rakibaysa waa inay awoodaan inay is barbar dhigaan nuquladii kala duwan ee files iyo lagu beddelo kuwii in mar hore lagu dhisay
Waxaad u abuuri kara rakibe for luqado kala duwan
Helitaanka version bilaashka ah
Soo dejisan Inno Setup
Faallo ku saabsan Inno Setup
Inno Setup Xirfadaha la xiriira
Mid ka mid ah database dunida caan ka ah SQL ah. Software wuxuu hubinayaa xawaaraha sare, habboonaan iyo fududaato isticmaalka.
software waxaa loogu talagalay si loo soo dajiyo oo ay maamulaan nidaamka kala duwan qalliinka ee deegaanka dalwaddii la soo koobin ee computer kasta.
Tani waa tifaftiraha qoraalka yar oo taageera ANSI iyo ASCII faylalka si ay u eegaan una sameeyaan faylasha NFO, DIZ iyo TXT.
deegaanka ee horumarinta software oo taageero luqadaha barnaamijyada caan ah. software wuxuu ka kooban yahay dhowr ah hawlaha waxtar leh in la abuuro codsiyada.
Garmin Express – maareeyaha aaladaha Garmin. Sidoo kale, softiweerku wuxuu soo dejinayaa cusbooneysiinta khariidadaha iyo waxyaabaha kale ee qalabka ka kooban.
utility The inuu ka soo kabsado faylasha tirtiray on your computer iyo sidayaal xog kala duwan. Sidoo kale waxaa jira shaqo ka mid ah dib u soo kabashada xogta ku saabsan drives burburay ama formatted ah.